C/kariim Qalbidhagax yuu u Mahad celiyey ? -
HomeWararkaC/kariim Qalbidhagax yuu u Mahad celiyey ?
C/kariim Qalbidhagax yuu u Mahad celiyey ?
July 9, 2018 F.G Wararka 0
Tan iyo intii xabsiga Itoobiya laga soo siidaayay Cabdikariim Sheekh Muuse Qalbi Dhagax oo ah sargaal sare oo ka tirsan jabhadda ONLF ayuu markii ugu horeysay si faahfaahsan uga hadlay qaabkii loo qabtay, aragtida uu hadda qabo iyo waxyaabaha u qorsheysan.
-Marka Hore Ilaahay
-Umadda sooomaaliyeed meel walba oo ay joogto .
-Bahda saxaafadda ee ku hadasha Afka-Soomaaliga.
-Baarlamanaaka Soomaaliya iyo Xildhibaannada labada gole.
-Ra’isul wasaaraha Itoobiya Dr Abiy Axmed oo go’aansaday isaga oo maxabuus ah oo god salkii ku jira inuu ka soo saaro, si sharaf iyo maamuus lehna u sii daayo kuna marti qaaday xafiiskiisa.
-Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam oo uu sheegay in siidayntiisa uu kala hadlay ra’isulwasaare Abiy.
-Dowladda Kenyana waan u mahadcelinayaa sida ay umadda Soomaaliyeed u martigelisay.
-Hay’adaha xuquuqal insaanka gaar ahaan HRW oo warbixin cad ka soo saartay.
Muxuu Soomaalida kula dardaarmay?
-Midnimo iyo is cafin
-Madaxda Soomaaliyeed wuxuu kula dardaarmay daacadnimo maadaamaa ay beri xilka tagayaan sida uu hadalka u dhigay.
-Madaxda Somaliland iyo Puntland wuxuu kula dardaarmay dhibaatada Tukaraq ka jirta sida ay wax u dhacayaan ay tahay wax laga xumaado dad soomaaliyeed baa ku dhintay dhul ka mid ah dhulki Soomaaliyeed in dad Soomaali ah la isugu dila ma ahe waxaan leeyahay dadkiina dhibaatada ka saara oo dagaalka joojiya.
-Soomaalida dhexdeedana wixi khilaaf ah iney wanaag iyo wadahadal ku dhammeeyaan.
Ballan qaadka Qalbidhagax?
-Inuu dadka Soomaaliyeed ula dhaqmo si aan eex qabyaalad qof jeceleysi midna aan lahayn.
-Inuu qayb ka noqdo xal u helidda iyo iisu furidda quluubta dadka Soomaaliyeed ee walaalaha ah kana shaqeeyo inta uu nool yahay.
-Inuu ka shaqeeyo sidii uu dadka Soomaaliyed u walaaloobi lahaa gacmahana iisu qabsan lahaa uu qorshahiisu yahay.
-In uu isu taago raadinta dal Soomaaliyeed iyo dad Soomaaliyeed oo mid ah.
-Waxuuna sheegay inuu aaminsanahay waxii khilaaf ee umadaha, dowladaha iyo ururradaba u dhaxeeya in wadahadal iyo si nabadgalya ah lagu dhameeyo oo aan umadda la gelinin dagaal aan dhammaaneyn.
Baaqa uu soo jeediyey?
Cabdikariim ayaa dhanka kale sheegay in Ra’isulwasaaraha Itoobiya uu go’aan rasmi ah ka gaarayo arrimaha quseeya guud ahaan Itoobiya, gaar ahaan gobolka Soomaalida, wuxuuna dadka ugu baaqay in fursadaas sida ugu wanaagsan ay uga faa’iideystaan.
Maxaa u qorsheysan?
Waxa kale oo uu sheegay in qorshihiisa uu yahay in uu safar dhulka ku maro Soomaaliya, ujeedkana uu yahay sidii uu dadka u mideyn lahaa, ulana hadli lahaa.